चीनले धानेको रुस विश्वकप, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
चीनले धानेको रुस विश्वकप
मस्को। विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) मा चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएपछि विश्वकप फुटबलको आयोजना र लगानीका विषयमा समेत ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू झस्किने वातावरण सिर्जना भयो । दुई वर्षअघि फिफाका तत्कालीन अध्यक्ष सेप ब्लाटरसहित जम्बो टोलीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बन गरिएपछि विशेषगरी पश्चिमा मुलुकका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विश्वकप फुटबलको प्रायोजन हात झिकेका थिए।
विश्वकपमा सहभागी नजनाए पनि चिनियाँ कम्पनीहरूले विश्वकपमा अर्बाैं अमेरिकी डलर प्रयोजन गरेका छन् । जारी विश्वकपमा सहभागी नभए पनि चीनले विश्व फुटबललाई ऐतिहासिक सहयोग गरिरहेको फिफाका सञ्चार प्रमुख फिलिप ले फ्लोच बताउँछन् । ‘फिफामा के भएको थियो भन्ने सबैलाई थाहा छ । भ्रष्टाचारका कारण दूषित बनेको विश्व फुटबललाई चिनियाँ लगानीले ठूलो टेवा दिएको छ । पश्चिमा राष्ट्रका कम्पनीहरूले फुटबलबाट हात झिकेका थिए । त्यसपछि फिफा आर्थिक हिसाबले कठिन मोडमा थियो । यस्तो अवस्थामा चिनियाँ बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले फुटबललाई गतिलो साथ दिएका छन्,’ फिलिप भन्छन् ।
रुस विश्वकपमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ दर्शक
यसैगरी ६० हजार चिनियाँ नागरिकले ‘फ्यान आईडी’ चिनियाँ राहदानीबाट लिइएको रुसी सञ्चार मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । रुस पुगेर भीआईपी प्यारापिट प्रयोग गर्नेमा पनि चिनियाँ नागरिक नै बढी छन् । युरोपेली फुटबलको गतिबाट मोहित देखिएको चीन अहिले घरेलु फुटबलको स्तर पनि बलियो बनाउन जुटिरहेको छ । त्यसैले त विश्वकपमा चलेका हस्ती फुटबलरको व्यावसायिक गन्तव्य पनि पछिल्लो समय चीन नै बन्न थालेको छ । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिक